Soosaarayaasha Shiinaha iyo Aluminium Aluminium | Kunda
Kala duwanaanta arjiga: aaladaha wareejinta tamarta (sida: rakibayaasha boorsooyinka, albaabada, daaqadaha, meydadka gawaarida, baalayaasha kuleylka, qolofka qeybta).
1000 aluminium taxane ah ayaa ka mid ah taxanaha leh waxyaabaha ugu badan ee aluminium ka kooban dhammaan taxanaha. Daahirsanaantu waxay gaari kartaa in ka badan 99.00%.
2000 taxane ulaha aluminium. Waxaa lagu gartaa adkeysi sare, oo leh waxa ugu sarreeya ee naxaas ah, oo qiyaastii ah 3-5%. 2000 taxanaha ulaha aluminiumku waa alaabada aluminium duulista, oo aan inta badan loo isticmaalin warshadaha caadiga ah.
3000 aluminium taxane ah ayaa laga sameeyay manganese oo ah qaybta ugu weyn. Taxanaha oo leh hawl ka hortag ah miridhku.
4000 ul aluminium taxane ah ayaa ka tirsan qalabka dhismaha, qaybaha farsamada, qalabka been abuurka, qalabka alxanka; barta dhalaalaysa oo hooseysa, caabbinta daxalka wanaagsan, iska caabinta kuleylka iyo iska caabbinta
5000 aluminium taxane ah ayaa sidoo kale loo yaqaannaa aluminium-magnesium alloys. Astaamaha ugu muhiimsan waa cufnaan hoose, xoog siligga sare iyo dheereyn sare.
6000 ul aluminium taxane ah. Waxay badanaa ka kooban tahay laba walxo oo magnesium iyo silicon ah, kuwaas oo ku habboon codsiyada leh shuruudaha sare ee u adkaysiga daxalka iyo qiiqa.
7000 ulaha taxan ee aluminium badanaa waxay ku jiraan zinc. Waxay sidoo kale iska leedahay taxanaha aerospace. Waa aluminium-magnesium-zinc-copper daawaha, daawaha kuleylka lagu daaweyn karo, iyo aluminium aad u adag oo aluminium ah oo leh iska caabin wanaagsan.
8000 ulaha taxanaha ah ee aluminium ayaa badanaa loo isticmaalaa aluminium aluminium, iyo ulaha aluminium badanaa looma isticmaalo wax soo saarka.
Hore: Roll Lead
Xiga: Saxanka Lead